लक्ष्मीका छोरा भन्छन्,‘भाई रातभर रुदैँ ममी खोज्छ, सुत्न दिदैन, मैले के गर्नु ?::mirmireonline.com
आ. व.: ०७४/०७५ | दर्ता न: १७८/०७३/०७४ | प्रबन्ध निर्देशक: सिर्जना तिमिल्सिना, सम्पादक: वाशुदेव तिमिल्सना | शनि, पुस ९, २०७३
लक्ष्मीका छोरा भन्छन्,‘भाई रातभर रुदैँ ममी खोज्छ, सुत्न दिदैन, मैले के गर्नु ?
काभ्रे, ९ पुस ।
काभ्रको सानो वाङथली–७ का १० वर्षिय सुमन परियारका वर्ष १३ का दाजु सागरलाई यतिबेला समस्यामाथि समस्या थपिएर थिलथिलो बनाएको छ ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भइ जन्मिएको गरिबीका कारण बिहाना बेलुको छाक टार्न उनिहरुलाई निकै हम्मेहम्मे परेको छ । उनीहरुकी आमा लक्ष्मी परियारले संसार छाडेर गइन् । बुबा पनि प्रहरीको हिरासतमा रहेकाले यी दुई अवोध बालकरुमाथि समस्याको चाँङ थुप्रिएको हो ।
ममीलाई मलमुत्र जवर्जस्ती कोच्याँएर कुटीकुटी मारे, बुबालाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरि लगेकाले खाने र बस्नेको ठेगान नभएको लक्ष्मीका १० वर्षिय माइलो छोरा सुमनले दुखेसो पोखे । उनले निकै भावुक हुदै भने,‘मेरो ममीलाई पोलमा बाँधेर दिसापिसाव खुँवाई हिरा र उनकी आमाले पिटेको झलझली आइरहन्छ ।’ उनले भने,‘ममी मरेको जस्तो लागेकै छैन, दुई वर्षको सानो भाईलाई खेलाएर मन भुलाउँन खोज्छु तर बेलुका भएपछि ममीको यादले तड्पाउछ ।’ लक्ष्मीका जेठो छोरा सागरले ममी मरेको दिनदेखि घरमा ताला लगाएकोले बिरक्त लागेको बताए । उनले भने,‘ अहिले हामीलाई सपना जस्तै लागेको छ ।
ममीको मृत्युभएदेखि कहिले हजुरआमाको घरमा त कहिले छिमेकीको घरमा वाँस वस्दै आएका छौँ । कहिले भोक भोकै पनि बस्दै आएका छौँ ।’ सागरले रुदै भने,‘हाम्रो विजोग अवस्था भएकाले मामाको घरमा वस्दै आएका छौँ । भाई सानै भएकाले फकाउनै गाह्रो परेको छ । ममीलाई अब हामीले कहिल्यै भेट्ने छैनौँ संसार छाडेर जानु भयो । अनि बुबालाई पनि प्रहरी अंकलहरुले लगेकाले फर्किएर आउनु भएको छैन ।’
सागरकी हजुरआमा विष्णुकुमारी नेपाली परियारले बुहारीको अकालमै ज्यान गएकाले अझै पनि लाश नजलाएको प्रष्ट्याइन् । ‘बुढेसकालमा आएर के देख्नु परेको यो आँखा’ले उनले गहँभरि आँसु झार्दै भनिन्,‘मलाई अरु भन्दा पनि यि नातीहरुको भविष्य देखेर मन भक्कानिएर आउँछ । गाउँमा स्याहारसुसार गर्ने कोही पनि नभएकाले उसको मामाले सहरमा लगेको छ ।’ किटानी जाहेरी दिएका सुमनका मामा लोकबहादुर परियारले न्यायको लागि शव नजलाएको बताए । उनले भने,‘हामीलाई दिदीको मृत्युको घटनाले सपना जस्तो बनाई दिएको छ । मेरी दिदिलाई मलमुत्र खुवाई कुटपिट गरि हत्या गरिएको छ ।
अझै पनि शव जलाएको छैन । पहिला उचित न्याय पाउँनु पर्‍यो ।’ उनले भान्जाहरुको बिचल्ली देखेर काठमाण्डौँमा सँगै राखेको पनि जानकारी दिए । हजुरआमा विष्णुकुमारीका अनुसार ३२ वर्षिय लक्ष्मीलाई स्थानिय शिक्षक हिरा लामा र उनकी आमा काइली मायाले भलिबल खेल्ने पोलमा बाँधेर मलमुत्र खुवाई कुटपिट गरेका थिए । लक्ष्मी घटना भएको तीन दिनपछि मृतक अवस्थामा भेटिएकी थिइन् ।
लक्ष्मीको खबरले सनसनी लक्ष्मीको मृत्यु भएको खबरले सनसनी मच्याँयो । हुन त देशमा दिनदाहडै जघन्य प्रकृतिको अमानविय घटना घटेपछि सनसनी पनि किन मच्चिदैन थियो र ? स्थानिय शिक्षक हिरा लामा र उनकी आमाले विद्यालय प्राङ्गणमा भलिबल खेल्ने पालेमा डोरीले बाँधेर दिसापिसाव खुवाइँ निर्घात कुटपिट गरेपछि प्रहरीले मिलापत्र गरेको थियो ।
प्रहरीकले मिलापत्र गरेको २४ घण्टा बित्न नपाउँदै उनी मृतक अवस्थामा भेटिएकी थिइन् । उनको मृत्युपछि प्रहरीले श्रीमान् मिलन परियारसहित ४ जनालाई पक्राउ गरि थुनामा राखेको छ । -नयापत्रिकाबाट
शनि, पुस ९, २०७३ मा प्रकाशित